गर्भावस्थामा एसआरएस2ट्रिमिस्टर - उपचार
गर्भावस्थामा ARVI को उपचार, विशेष गरी यसको दोस्रो ट्रिमिस्टरमा, एक एकीकृत दृष्टिकोण चाहिन्छ। यस तथ्यको बावजुद यस समयमा बच्नका सबै प्रणालीहरू बनाइएका छन्, भ्रूण-भ्रष्टाचारिक क्षमताको लागि खतरा हो। भाइरल रोगको गर्भावस्थाको बेला भविष्यको मातृको बीमारीको परिणामस्वरूप, बच्चा शब्द, सानो र उच्च डिग्रीको डस्ट्रोफी संग जन्मेको हुनसक्छ। यस्तो उल्लङ्घनबाट जोगिनको लागि, चल्नको लागि नजिकको नबिर्सनुहोस् र गर्भावस्थाको समयमा ARVI कसरी व्यवहार गर्ने बारेमा कुरा गरौं, र दोस्रो ट्रिमिटरमा के गर्न सकिन्छ।
गर्भावस्थामा ARVI को विशेषताहरू
गर्भावस्थाको समयमा तपाईंले ARVI को उपचारको बारेमा विस्तृत बताउनु अघि हामी यस रोगको मुख्य विशेषताहरू विचार गर्नेछौं।
एक नियमको रूपमा, सबै क्याटर्रल रोगहरूलाई भनिन्छ प्रोड्रोमल अवधिको साथ सुरु हुन्छ, जब पहिलो संकेतहरू देखा पर्दछ कि एक संक्रमण वा भाइरस शरीरमा प्रवेश गरेको छ। यस समयमा, गर्भवती महिलाहरूले वृद्धिको थकान, कमजोरी, टाउको दुख्ने, पछाडी, गले, झन्डा आदि जस्ता शिकायत गर्दछ।
यस्तो घटना लामो 1-2 दिनको लागि देखिएन। यदि गर्भवती महिलाले अचानक माथिको लक्षणको साथ पाउँछ र अन्धकार महसुस गर्छ भने, तपाईले एक डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुपर्दछ जुन, परीक्षा पछि, निवारण उपायहरु को वर्णन गर्नेछ।
शरीरको तापमानमा वृद्धि पहिलो संकेत हो जुन भाइरसले पहिले नै यसको प्रभावलाई शरीरमा शुरु गर्यो। त्यस्तो अवस्थामा यो रोगको उपचार सुरु गर्न आवश्यक छ।
एआरवीले दोस्रो ट्रिमरमा कस्तो व्यवहार गर्यो?
एक नियमको रूपमा, शरीरको उच्च तापमानमा छोटो समय पछि, दौडने नाक, खाँसी, लचिलोपन, हड्डिहरु र मांसपेशिहरु मा दुखाइ थपिएको छ। यो तिनीहरू हो जसले रोगको वायरल प्रकृतिको संकेत गर्दछ। समय अवधि जसको समान घटना हुन सक्छ, सामान्यतया 4-7 दिन हुन्छ। यो समयमा गर्भवती महिलाले डाक्टरहरूबाट मद्दत चाहिन्छ।
यो उल्लेखनीय छ कि गर्भावस्था को समयमा वायरल रोगहरु को लक्षण अधिक लक्षण हो। मुख्यतः उद्देश्य को रोग को अभिव्यक्ति को दबाएर उद्देश्य र मां को सामान्य शर्त मा सुधार को उद्देश्य देखि।
त्यसोभए, रोगको पहिलो लक्षणको रूपमा, गर्भवती महिलाले शरीरमा शारीरिक तनाव कम गर्न र बाहिरी आराम देख्नुपर्छ। यस समय उनीहरूलाई एक धेरै राम्रो पेय चाहिन्छ, जुन रास्पबेरी, मर्स, कम्पन संग चियाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। रातमा तपाईं 1 चम्मचको मासुको साथमा एक गिलासको न्यानो दूध पिउन सक्नुहुन्छ, यदि एक महिला एलर्जी छैन। यस उत्पादनले पसीना बढाउने गरी तापमानलाई पूर्ण रूपमा घटाउँछ।
यदि गर्भवती महिला बहादुर नाकबाट ग्रस्त हुन्छ भने, नाक धोएर तपाइँ औषधिमा बेचेको खरानी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। बालबालिकाको दौडमा भगोही औषधिको प्रयोग सख्त रूपमा निषेध गरिएको छ। बरु, तपाईं समुद्री पानी (Aquamaris, Aqualor) मा आधारित तयार रेड स्प्रे प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
पीडा र पछाडीको साथ, जडी बूटी को कण संग कुल्ला गर्न आवश्यक छ जस्तै चिमनी, मातृ-र-माथिका, रोपणका पातहरू, कालो कवरेज। सोडा पेय र नुनमा आधारित समाधान तयार गर्न पनि सम्भव छ (उज्यालो पानीको 250 मिलीलीटरको लागि 1 चम्मचौला)।
एक विशेष उपचारको वर्णन गर्न, तपाईंलाई एक डाक्टरसँग सम्पर्क गर्न आवश्यक छ - तपाई आफैले औषधि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।
के दोस्रो ट्रिमिटरमा खतरनाक छ?
दोस्रो ट्रिमिस्टरमा गर्भ गर्भ भएको एआरभी उपचारको लामो अभाव संग, त्यहाँ नकारात्मक परिणाम हुन सक्छ, जुन निम्नानुसार प्रकट भएको छ:
गठन को उल्लङ्घन र भ्रूण मा तंत्रिका तंत्र को विकास;
हप्ता 14 मा दुर्व्यवहार गर्भपात
endocrine प्रणाली को विकास मा एक अवरोध;
इन्टर्राटराइन ओजनेनसिसको उल्लङ्घन (पछि पछि केटीहरु लाई जन्म मा बांझपन हुन सक्छ)।
दोस्रो ट्रिमिस्टरमा गर्भावस्थामा ARVI को लिखित परिणामहरू गर्भवती रोगहरूको परिणामको रूपमा भ्रूण द्वारा प्रभावित हुन सक्छ कि विकारहरु को एक पूर्ण सूची देखि दूर छ।
गर्भवती महिलालाई के गरिसकेमा के गरौं?
गर्भावस्थाको बेला कपाल
गर्भावस्थामा कुन एन्टिहास्टामिन उपलब्ध छन्?
गर्भावस्थामा हेक्सोरोल - अनुप्रयोगको सबै सुविधाहरू
गर्भावस्था र काम
विषाणुको खतरा - लक्षण
एक कठोर गर्भावस्था को सफाई पछि अलगाव
बच्चाको लागि अस्पतालमा तपाईंलाई के चाहिन्छ?
ढिलो चरणहरूमा गर्भावस्थाको समयमा कब्ज
गर्भावस्थाको समयमा निद्रा खुट्टा
प्रारम्भिक गर्भावस्थामा विषाक्तता - उपचार
डार्विनको सिद्धान्त - मानिसको उत्पत्तिको सिद्धान्त र प्रमाणको प्रमाण
कसरी सुत्ने र ताजा फलबाट जंगलको गुलाब तयार पार्नु हुन्छ?
कपालको लागि कपाल-ब्रश
Ovulation को लागि परीक्षण - कसरी प्रयोग गर्ने?
मासिक धर्म - कति दिन सामान्य छ?
एक शौचालय संग संयुक्त एक सानो बाथरूम को आंतरिक
आफ्नै हातमा क्यान्डलस्टिक
किन खैरो सपना देख्छ?
खैरो टी शर्ट
आहार "माइनस 60"
ड्रअरको साथ भान्सा बेंच
बच्चाको लागि मालिश - 1 महिना
स्ट्रबबेरीको साथ डम्प्लिंग डम्पप्लिंग
2014 को बैगको वास्तविक मोडेल
विवाहको लागि सेतो सेतो
जबरजस्ती दाँयामा गर्दनमा लिम्फ नोड
कोट धोने को लागि मतलब छ
कपडाहरूमा फैशनेबल विचारहरू
जेनरेन्स जोन्स फेरि मुक्त छ